အသည်း ယားစရာ ကောင်းတဲ့ ပုံစံအမျိုးမျိုး အားကစားလုပ်ပြနေတဲ့ မယ်လိုဒီ ရဲ့ ဗီဒီယို – Shwe Yoe
အသည်း ယားစရာ ကောင်းတဲ့ ပုံစံအမျိုးမျိုး အားကစားလုပ်ပြနေတဲ့ မယ်လိုဒီ ရဲ့ ဗီဒီယို
ချစ်ပရိသတ်ကြီးရေ ဒီတစ်ခါမှာတော့ အနုပညာ လောက မှာ အောင်မြင်မှုတွေကို ရရှိထားပြီး ဖြူစင်ဝင်းပတဲ့ အသားအရည်လေးနဲ့ အရွယ် တင် နုပျိုနေတဲ့ မင်းသမီးချောလေး ကတော့ မယ်လိုဒီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သူမကတော့ သရုပ် ဆောင်ပိုင်းတွင် ထူးချွန်တဲ့ သူလေး ဖြစ်တာကြောင့် အကယ်ဒမီ ထူးချွန်ဆုကိုလည်း ရရှိကာပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုကို အခိုင် အမာ ရရှိထားတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။
မယ်လိုဒီဟာ အနုပညာ နယ်ပယ်မှာ အချိန်အတော်ကြာ ရပ်တည်နေနိုင်ပြီး ခုချိန်ထိ အောင်မြင် ကျော်ကြားနေတဲ့ မင်းသမီးချောလေးဆိုလည်း မမှားပါဘူးနော်……..။သူမကတော့ ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားလှပပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ ပင်ကိုယ် အလှတရားတွေကြောင့်….
ပျိုမေလေးတွေက ချစ်ခင်အားကျနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သားလေး သိဒ္ဓိစစ်ကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ထားတာ ဖြစ်ပြီး အမေတူပြီး ဖြူဖြူချောချောလေး ဖြစ်ပါတယ်နော်…။မယ်လိုဒီ ကတော့ Single Mother တစ်ယောက်အဖြစ် ရပ်တည်နေပြီး …..
သူမရဲ့ သားလေးနဲ့ အတူ ဘဝကို အေးချမ်းစွာ ဖြတ်သန်းနေတဲ့ မင်းသမီးချောလေး ပဲဖြစ်ပါတယ်။မယ်လိုဒီက တစ်သားမွေး တစ်သွေးလှသလို ကျစ်လစ်သွယ်လျ လှပတဲ့ ဘော်ဒီ အချိူးအစားလေးကြောင့် …..
မိန်းကလေးချင်းချင်းတောင် အားကျနေရတဲ့သူလေး ဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်လည်း မယ်လိုဒီဟာ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးတွေ ကို ပရိသတ်တွေ အတွက် ဖော်ပြပေး လာတာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ Facebook စာမျက်နှာထက်မှာ…….
“အနက်ရောင်လေးနဲ့ဆို ပိုလှမယ်ပြောလို့ပါ”ဆိုတဲ့ စာသားလေးနဲ့အတူ လှပတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို တင်ပေးလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်ပရိသတ်တွေ အတွက် မေမေမယ်လိုဒီရဲ့ ခပ်မိုက်မိုက် ပုံရိပ်လေးတွေကို ပြန်လည်ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။
သူ့ကို မကျေမနပ် ဝေဖန်နေကြတဲ့သူတွေအားလုံး သိဖို့ သူ့ရဲ့ သဘောထားကို ပြတ်သားစွာ ပြောလာတဲ့ သရုပ်ဆောင် ခန့်စည်သူ
အေးမြတ်သူ ရဲ့ ပရိတ်သတ် အကြိုက်တွေ့စေခဲ့သော အလန်းစား ဖက်ရှင် ပုံရိပ်များ စုစည်းမှု